Adore Cricket One-nil to the Aussies - umdlalo ku
Kulungile ake siqale ngokubaluleke kakhulu, umzuzwana ongase ukhohlwe ngokushesha ngumshini wokuphambili, kepha kufanele kubanjiswane ngokuthi kuyini ikhilikithi. Use 3rd isikhumbuzo sokufa kukaPhillip Hughes, UCaptain Root uthathe ukulethwa okusheshayo waqonda ngasohlangothini lwesigqoko sakhe. Yonke inkulumo eyayingaphambi kochungechunge oluphathelene “nemisebenzi ephelayo” yakhonjiswa ngokushesha ukuthi iyilokho - ukukhuluma, njengoba ama-Aussies ahamba ngokushesha enza isiqiniseko sokuthi Root ilungile. Abezindaba bangakuthanda ukusakaza izingoma ezizwakalayo, bese uzama ukukhuluma impi ngaphambi kwesikhathi, kepha uma kukhulunywa ngebhizinisi abadlali bahloniphana kakhulu, futhi lapho kubaluleke kakhulu, e impi ibambene ngezihluthu, akubanga nakungabaza ukuqinisekisa ukuthi omunye umdlali ulungile. Kwakukuhle ukubona.
Kuthiwani ngomphumela weNgilandi, bangathatha noma yikuphi okuzuzanayo kukho? Yiqiniso akukuhle engase alahlekelwe okukhulu ngokufihla 10 ngamawikhedi, kodwa kulula ukwenza ukuthi ukushaya kubukeke kulula ku 4th ama-innings anenombolo ephansi yokujaha. Ukube ilitshe belikade liyi-100-150 ligijima kakhulu i-Australia belizokuzwa ingcindezi ye-boardboard futhi umphumela kungenzeka ukuthi wehluke kakhulu. Abanye abahlaziyi sebevele bebuza ukuthi i-England izothatha kanjani 20 ama-wike - bawathatha kahle 10 nje phezu 300 ngaphandle kwenkinga kwii-innings zokuqala, ngakho-ke mhlawumbe ezinye izinkumbulo ezinde kancane ziyadingeka. Umphumela ubonakalise isikhundla ngemuva kokuthi amaqembu womabili ehlasele kanye - umehluko osemqoka wawukhona 1 we 4 amalulwane esigaba somhlaba enza ikhulu, futhi uhlangothi lwakhe waqhubeka uwine. Ngabe uRoot bekunguye owenza i-150 kuma-innings okuqala, futhi Smith kuphela 50, I-England ibizobheka ukuhola kwe 200, isikhundla ababezosinqoba nakanjani.
Izindaba ezimnandi kakhulu ukuthi i-England yancintisana kahle okokuqala 3 izinsuku nengxenye, naphezu kokuntuleka okudumazayo kokugijima okuvela kubapheki babo abaphambili uCot no Root. Abafana abasha benze kangcono kakhulu kunendlela abaningi ababesabe ngayo, noSboneman, UVince noMalan bonke badlula abangama-50 kuma-innings okuqala. Amanye ama-pundits enza elikhulu i-England "umsila" enza ama-run ambalwa kuma-innings okuqala kodwa uMoeen wenza ama-run kuma-venings amabili, Kubanzi okwenganyelwe 20 ngokumelene nokujaha okusheshayo komoya (ungcono ukwedlula indlela aphatha ngayo eminyakeni yamuva) futhi uBairstow wenza isithunzi esingu-42 kuma-venings wesibili. Akekho noyedwa obebukeka emangele noma ethuswe yilesi simo njengoba abanye abadlali beye ochungechungeni lwangaphambilini ngaphansi.
Ngakho-ke ukuze ulinganise izinto bese ugcine uchungechunge oluzoncintisana ne-England kudingeka lunqobe isivivinyo sesibili e-Adelaide, njengoba benza ngama-iningi e 2010. Kuqhubeke futhi phezulu!
Trent Ibhuloho - Ukuvivinywa phansi Umhlahlandlela (319 ukubukwa)In the yokuqala ochungechungeni oluhlelelwe "khaphi kuze ngezizathu" thina isici Trent Ibhuloho imininingwane kusakhiwo bomhlaba futhi izindawo ezingcono ahlale Ukuze uqale nge, nansi isithombe ...
I Bowler sika Holding ... innuendo kusaqhubeka (84 ukubukwa)Cishe zonke fan cricket ayobe ewazwile lesisho edumile, kukhonjwe Brian Johnston, "Holding The Bowler sika, the Batsman sika Willey". Kungakhathaliseki noma cha lokhu ngempela kwakuthiwa bukhoma emoyeni engasekho okubalulekile omkhulu ...
Can red-green abantu ibala lesikhumba ukudlala ikhilikithi? (79 ukubukwa)Noma kukhathaza nje ukukhononda ngazibonela ngokwami ​​mayelana ekupheleni play (ngenxa yokuthi bese kumnyama) izolo ebusuku, Kwafika umcabango engqondweni kimi - nge ibhola elibomvu futhi pitch green, kungaba red-green abantu ibala lesikhumba ukudlala ikhilikithi ...
BROADside eNgilandi mayelana abadlali kokuphumula (73 ukubukwa)Njengoba ngihlezi ngilalele T20 freak-show (it lake beats whatever insipho esekelwe kadoti umka Obheka) Kade ngicabanga impikiswano edaleke ngemuva kokuthi i-England iphumulele abadlali abayisihlanu abaphambili ...